3 ụzọ uzo iCloud mkpọchi n'ihi na gị iphone
3 Ụzọ ka uzo iCloud mkpọchi n'ihi na gị iPhone.
2.Bypass iCloud ebighị mkpọchi Software
3.Wondershare Nchekwa nchicha
Ọ bụrụ na ị na-eji 'Chọta My iPhone' ngwa, ị ga-ahụ na ọ na-abịa na a atụmatụ nke iCloud ebighị mkpọchi. Mgbe i nwere nke a na ngwa nyeere, ọ bụla onye ọrụ ga-mkpa ịbanye gị Apple id na paswọọdụ ma gbanyụọ ngwaọrụ gị ma ọ bụ nweta ya ma ọ bụ ọbụna ka ọ na. Na nkenke, ọ bụla ohere na ekwentị ahụ ga-achọ Apple NJ na paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ ndị ị nwere ike uzo iCloud ebighị mkpọchi, anyị ga-ekere òkè dị mkpa banyere otu ihe ahụ. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike otú ime ka ị ga-ahụ mkpa aka uzo na-ekpochi iCloud mere na i nwere ike iji ngwaọrụ gị ọzọ. E nwere ọtụtụ ngwá ọrụ na software nke ike-eji Ị kpọghee ekwt iCloud. Anyị ga-atụle atọ n'ime ha.
Ọ bụrụ na ị na-aga site nzọụkwụ awa site Apple n'ógbè ha, ha ndị na-ekwu na ị ga-kwesịrị ime ndị na-esonụ.
Tinye Apple NJ na paswọọdụ wee inweta ohere ka ngwaọrụ gị.
Ozugbo i wee banye na, ị kwesịrị ị mgbe ahụ gaa chọta m iPhone na gbanyụọ ya.
Ugbu a, i kwesịrị hichapụ ihe niile ntọala na data.
Iji mee nke a, na-eso nke a igodo.
Bugharịa na ntọala na mgbe ahụ isi 'n'ozuzu'. N'okpuru 'n'ozuzu', akpali n'elu ka 'tọgharịa' na mgbe ahụ i kwesịrị pịa 'ihichapu ọdịnaya na niile ntọala'.
Nke a ga-Ọkpụkpọ ekwentị gị kpamkpam ma mee ka ọ dabara maka iji ọzọ.
Ọ bụrụ na i chefuola paswọọdụ gị, ị nwere ike họrọ iji tọgharịa ya site na ịga na Apple NJ na peeji nke na-esonụ ntuziaka.
Part 2 uzo iCloud ebighị mkpọchi Software
Nke a bụ ngwá ọrụ ọzọ nke nwere ike abịa kemfe. E nwere dị iche ngwaọrụ nke na-ekwe nkwa iji nyere gị aka Ị kpọghee ekwt iCloud ngwá ọrụ na mkpa ka i soro ndị a mfe ntụziaka na mepụta ọrụ.
• Download uzo iCloud ebighị mkpọchi ngwá ọrụ na akụrụngwa gị site na ịpị ebe a.
Ẹkedori ngwá ọrụ.
Jikọọ gị iPhone gị PC na enyemaka nke eriri USB na mgbe ahụ, tinye ya na DFU mode.
Ugbu a, pịa na 'Malite' bọtịnụ.
Ị ga-ahụ ndepụta nke modul na ị ga-họrọ nri nlereanya na mgbe ahụ kụrụ na-esote.
Ka software na-arụ ọrụ ya ụzọ. O nwere ike buru 20 na 25 nkeji.
Ozugbo usoro-agwụ agwụ, ekwentị gị ga-reboot site na ya onwe.
Jide n'aka na ịtọ gị ekwentị ọzọ dị ka ọhụrụ.
Hụ na ị na emewo 'ịhụ m iPhone' anya.
Nkebi nke 3 Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser bụ otu n'ime ndị kasị dị irè ngwaọrụ nke a maara maka àjà ụfọdụ ndị kasị mma atụmatụ nke nwere ike ịbụ nke enyemaka. SafeEraser bụ otu n'ime siri ike ngwaọrụ awa site Wondershare nke nwere ike abịa kemfe n'ihi gafere gị iCloud ebighị mkpọchi. Ọ na-arụ ọrụ Windows XP / Vista / 7 na ọbụna 8.
Ọ na-maara na-kemgwucha bara uru maka ihichapụ zuru ezu data ugbu a na gị iPhone. Nzọụkwụ a ga-agbaso bụ oké mfe ma i nwere ike iji ya n'ihi nke gafere ọtụtụ mkpọchi.
Ọ bụrụ na, na ị zụrụ a ọhụrụ iPhone na o yiri ka a ga-iCloud ekpochi, i nwere ike iji nke a software n'ihi gafere ọtụtụ mkpọchi.
• Download Wondershare SafeEraser omume na wụnye ya na akụrụngwa gị
• Jikọọ gị iPhone gị usoro na usoro ihe omume ga-chọpụta ngwaọrụ gị.
• Ị ga-ahụ a welcome ihuenyo ebe a ga-enwe abụọ nhọrọ, ya bụ
o 'ihichapu niile data na ngwaọrụ'
o 'ihichapu ehichapụ faịlụ'
• Pịa on 'ihichapu niile data na ngwaọrụ'.
• Na nke a otu otu click, ị nwere ike ihichapụ niile data nke bụ ugbu na ngwaọrụ gị.
• Pịa na 'Malite' na ihe niile data ugbu na ekwentị gị ga--ekpochapụ kpamkpam.
• Mgbe nhichapụ e dechara, ị ga-enwe a ozi n'ikwu otu ihe ahụ.
• The data e kpamkpam ehichapụ ugbu a na ị nwere jisiri ọma site gafere iCloud mkpọchi.
Arụ ndị a ga-akwụsị ihe niile data site na ekwentị gị. Otú ọ dị, e nwere otu ihe na-eme. Iji hụ na i kpamkpam ehichapu akaụntụ gị, i kwesịrị unregister ngwaọrụ gị si gị Apple akaụntụ. Eso ndị a na-eme otu ihe ahụ.
Ikpeazụ nzọụkwụ bụ unlink gị iPhone si gị Apple akaụntụ.
Gaa Apple si website ebe a.
Tinye nzere gị iji nweta abanye na akaụntụ gị.
Ugbu a, pịa edit dezie ngwaahịa.
Na nri nke ngwaahịa, nne Mmetụta na 'X' button.
Ugbu a, ego na 'unregister' button.
Nke a bụ ihe ị chọrọ ime n'ihi gafere ọtụtụ ebighị mkpọchi na gị iPhone na ọ ga-enyere gị aka iji ekwentị gị ọzọ. Ọ bụ n'ezie otu nke kasị mma ngwaọrụ nke ị nwere ike iji.
3 Mfe Ụzọ Access iCloud
Ijikwa Multiple Apple Devices na Otu Ezinụlọ Apple ID abụghịzi Nightmar
Olee otú ntọlite ​​na-eji iCloud Photo Ịkekọrịta.
3 Ụzọ ka uzo iCloud mkpọchi n'ihi na gị na iPhone.
Otú melite iCloud Akaụntụ na gị Android
Otú nyefee foto site na iCloud ka Android
> Resource> iCloud> 3 Ụzọ ka uzo iCloud mkpọchi n'ihi na gị na iPhone.